Mahad Salaad’ Qorshaha Daahsoon Ee Madaxweyne Farmaajo Iyo Dagaal ku Soo Fool leh Reer Muqdisho | Marsa News
Mahad Salaad’ Qorshaha Daahsoon Ee Madaxweyne Farmaajo Iyo Dagaal ku Soo Fool leh Reer Muqdisho
March 14, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Xildhibaan Mahad Salaad ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay barkulanka bulshada ee facebook, kaga hadlay xaalada guud ee somaliya iyo qorshayaal halis ku ah dadka halkaa ku dhaqan oo uu sheegay inuu farmaajo u maleegayo dabino halis galin kara in badan oo siyaasiyiin iyo bulshadaba ah waxaanu qoraalkiisa cinwaan uga dhigay
‘Qorsheyaasha daahsoon ee Madaxweyne Farmaajo iyo dagaal ku soo fool leh dadka reer Muqdisho:
Ciidamadii ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya ee Ururka 60aad ayaa laga wareejiyay amniga Madaxtooyada Soomaaliya iyadoo lagu badalay ciidamo laga keenay Gobolka Gedo. Waxaa sidoo kale la kordhiyay tirada ciidamada ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya oo markii hore ahaa 600 hadana la gaarsiiyay 1,600.
Ciidamada la badalay ayaa la soo shaqeeyay Madaxweyneyaashii hore Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh waxayna dhamaantood ka soo jeedaan Gobolka Banaadir iyo deegaanada ku xeeran. Horay ayaa sidaan oo kale ciidamo laga qaaday Gobolka Banaadir iyo Shabeelada Dhaxe loo geeyay deegaano katirsan Gobolka Shabeelada Hoose kadibna weeraro qorsheysan inta Alshabaab ku qaadeen lagu xasuuqay ciidamadaas, gaadiidkii iyo hubkii ay wateena ka qaateen. Weeraradaas waxay ka kala dhaceen Bariire (Agoosto 2017), Awdheegle (Agoosto 2019) iyo Ceel Saliini oo labo jeer ah (Septeembar 2019 iyo Febaraayo 2020).Valueimpression Placeholder
Weerarada ciidamadaan lagu xasuuqay ilaa hada madaxda dowladu kama hadlin, mararka qaarna hanbadii ka hartay ayaa xabsiyada loo taxaabay sidii Bishii Septeembar ee sanadkii 2019 ka dhacday deegaanka Ceel Saliini ee Gobolka Shabeelada Hoose.
Sidoo kale asbuucyada nagu soo aadan waxaa dalka dib loogu soo celin doonaa Ciidamadii Eritereeya lagu tababaray ee Madaxweynaha iyo Taliyaha Nabad Sugida sida gaarka ah u qorteen. Cidamadaas ayaa la geyn doonaa sida ilo xog ogaal ah ii sheegeen baraha koontaroolada magaalada Mogadishu laga soo galo si ciidamada militariga ee duurka loo bixiyay looga mamnuuco in ay magaalada dib ugu soo laabtaan. Qorshahaan ayaa ah bilowga diyaar garow Madaxweyne Farmaajo ku doonayo suuro gelinta dhowr arimood:
In ciidamada dowlada laga sifeeyo dadka ka soo jeeda Gobolada Banaadir iyo Shabeelada Dhaxe. Iyadoo xeryo banaanka ah loogu oodayo Alshabaab si ay u laayaan, inta soo hartayna laga celiyo in ay dib ugu soo laabtaan magaalada Mogadishu.
In marka la gaaro dhamaadka muddo xileedka Madaxweyne Farmaajo oo hada ay ka harsan tahay wax ka yar sanad uu isku dayo in uu xukunka ku sii haysto awood ciidan sidii nidaamkii keligii taliska ahaa ee Maxamed Siyaad Bare.
Hadii gadood ciidan ama mid siyaasadeed uu ka dhasho meelmarinta qorsheyaashaan gurracan ee Madaxweyne Farmaajo damacsan yahay in uu ciidamadaan u isticmaalo la dagaalanka siyaasiinta iyo caburinta bulshada ku dhaqan Gobolka Banaadir.
Hadaba, mar hadii Madaxweyne Farmaajo uu xilkii Soomaali u dhiibatay ku bedelay qabiileynta hay’adihii dowlada iyo hurinta colaado iyo dagaalo dalka oo dhan ah sida: Somaliland, Puntalnd, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubaland gaar ahaan Gobolada Gedo iyo Jubadda Hoose, waxaa isweydiin mudan waxa kale ee laga filan karo oo aan ahayn in uu dalka dib u geliyo dagaal sokeeye.
Ugu dambeyn waxaan ku talin lahaa in dowlad goboleedyadu ka ilaashadaan Farmaajo iyo kooxdiisa maamuladooda iyo in gaar ahaan reer Galmudug, Hirshabeelle iyo Gobolka Banaadir si degdeg ah isugu yimaadaan kulan wadatashi oo ku saabsan waxa laga yeelayo kooxdaan sharciyadii iyo dastuurkii dalka ka tallaabsatay.